Mangroves-ka Vietnam ayaa gaashaan u ah isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Mangroves-ka Vietnam ayaa gaashaan u ah isbedelka cimilada
Xayawaanka loo yaqaan 'Shrimp aquaculture' wuxuu kumanaan beeraley ah ka saarayaa faqriga dalka Vietnam, hase yeeshe wuxuu sababaa sii socoshada burburka mangroves. Nidaamyadan deegaanka waxay leeyihiin saameyn ay ku joojin karaan nabaad-guurka iyo kor u kaca heerarka badda waxaa keenay isbedelka cimilada.
Saamaynta isbeddelka cimilada ayaa sii kordheysa maalin kasta mangroves -yadani waa nooc ka mid ah caqabadaha ka ilaaliya Vietnamese-ka dhibaatooyinka sida nabaad-guurka iyo kor u qaadista heerarka badda. Xayawaanka loo yaqaan "Shrimp aquaculture" ayaa ku sii fidaaya aagaggan waxayna kobcinayaan ganacsiga iyo dhaqaalaha. Si kastaba ha noqotee, waxay saameyn ku yeelataa mangroves, wayna sii xumaataa waxayna u keentaa inay lumiyaan kaalinteeda oo ah gaashaan kahortaga isbedelka cimilada.
1 Xaalufinta dhirta
270.000 hektar oo daboolay xeebta Vietnam ee 1980 kaliya 60.000 ayaa hadhay, sida ku cad xogta dowladda. Xaalufinta dhirta waxaa sababay magaalaynta iyo horumarka dalxiiska. Intooda badan waxaa sababa warshadaha gawaarida, oo sanadkii 2016 dhoofiyay 2.700 bilyan oo Yuuro.
Biyo-abuurka ayaa si aad ah u ballaariyay tan iyo 90-yadii iyo waxay gacan ka gaysatay luminta mangrove-ka. Hadda waxaa jira wacyigelin dheeri ah oo ay tahay in la ilaaliyo, laakiin waxaa jira tiro aad u yar oo harsan oo ay adag tahay in dib loo cusboonaysiiyo
Mangroves-ku waxay leeyihiin astaamo gaar ah oo ka dhigaya kuwo iyaga u gaar ah, sida isku darka biyaha macaan iyo milix ee ka soo baxa badda iyo webiyada. Thanks to mangroves-ka, in ka badan 700 nooc oo xayawaan iyo dhir ah ayaa wada noolaan kara, marka lagu daro ilaalinta xeebaha jilicsan ee Vietnam laga bilaabo sare u kaca heerarka badda iyo yareynta saameynta duufaannada.
Dhibaatada jirta ayaa ah in beeraleyda ay jaraan mangeerada si ay boos uga helaan dhalinyarada. Si looga badbaado dhibaatadan, waa la abaabulay tababarka 4.100 biyo-biyoodka Kuwii lagu baray beerashada dabiiciga iyo talaabooyinka lagu helayo dhamaan shahaadooyinka lagama maarmaanka u ah dhoofinta qolofta oo leh shaabadda dabiiciga ah.
Dhammaantood waa inay bartaan inay ka shaqeeyaan aag aan qorin si loo ballaariyo carruurtooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Mangroves-ka Vietnam ayaa gaashaan u ah isbedelka cimilada
Irma, duufaanta cusub ee weyn ee kusii jeedda Kariibiyaanka
Kuleylka adduunka ayaa kor u qaadi doona isticmaalka 6% qaboojiyaha